Talaallii | Ramsey County
Dhiheessa fayyaaf barbaachisan
Dhiheessi dhumataa waan jiruuf talaallii bilisaa fi kaardii kennaa
Ramzii kaawuntii irraa argadhu.
Bakka feete jiraattuus talaalamtee kaardicha argachuu dandeessa.
Yeroo dhiheessi dhumaa jiru kanatti talaallii Pfizer kan duraa fudhachuun kaardii kennaa dolaara 50 argadhu.
Akkuma talaalamteen kaardii kennaa sana fudhadhu. guchni guutamu tokkolleen hin jiru.
Kaardiin kennaa kun namoota Fuulbana 27 booda talaallii kilika Biiroon fayyaa Simpool Ramsii kaawuntiin qophessetti fudhatan qofaaf kennama.
Kaardiin kennaa talaallii madinummaa ol guddifachuu sanaaf hin kennamu.
Ati talaallii fudhachuun sagantaa Minisootaan badhaasa talaalliif qopheesse irraa abbaa carraa tahuu dandeessa. Hubannoo dabalataaf
Talaalliin COVID-19 bilisaan kennama. inshuraansii fi xalayaa eenyummaa qabaachuuniis hin barbaachisu.
Odeeffannoo Kilinika Ramsii kaawuntiin gaggeeffamuuf sagantaa gadii kana ilaali, lakkoofsa 651-266-1198.
Talaallii COVID-19 kee kan tolaa fudhadhu.
Namoonni kamuu kan umriin isaa waggaa 5 fi sanaa ol tahe talaallii covid-19 fudhachuu ni dandaha.
Inshuraansiin hin barbaachisu. Waraqaa eenyummaa qabaachuun dirqamaa miti.
Talaallii argachuuf lakkoofsa 651-266-1198 bilbiluun yeroo sagalee waraabbiin sitti dhagahametti afaan barbaadde filadhu.
Talaalliin covid-19 kan madinummaa ol guddisuuf fudhatamu yeroo ammaa namoota umriin isaanii 12 fi sanaa ol tahee fi talaallii marsaa lammaffaa kan Pfizer yokiin Moderna yoo xiqqaate ji’a shan dabranitti fudhatan yokiin Johnson fi Johnson yoo xiqqaate ji’a lama dura fudhataniif ni jira. Hubannoo dabalataaf
Talaallii kee kan jalqabaa iddoo biraatti waraannattullee marsaa lammaffaa yokiin talaallii madinummaa ol guddisuuf fudhatamu Ramsii Kaawuntii biratti fudhachuu dandeessu.
Beellama qabadhu. Yoo beellama qabachuuf gargaarsa barbaadda tahe 651-266-1198 irratti bilbili.
Amajjii 29 (3WB - 6WB)
Pfizer 5+ marsaa duraa waraannachuu, marsaa lammaffaa waraannachuu / Pfizer 12+, Moderna 18+ madinummaa ol guddifachuuf waraannachuu.
Gurraandhala 5 (3WB - 6WB)
Gurraandhala 12 (3WB - 6WB)
360 Colborne - Saint Paul Public Schools
Amajjii 27 (3WB - 6WB)
Pfizer 5+ marsaa duraa waraannachuu, marsaa lammaffaa waraannachuu / Pfizer 12+ madinummaa ol guddifachuuf waraannachuu.
Gurraandhala 3 (3WB - 6WB)
Gurraandhala 10 (3WB - 6WB)
Gosoota (Delta, Omicron)
Gosoonni kunneen vaayirasii covid-19 waliin wal fakkaatu. Yeroo mara muuxachuun waan jijjiiramaniif vaayirasii gosa biraas yeroo biraatti arguu dandeenya. Gosti vaayirasii muraasni dhufaniituma kan deeman(badan) yoo tahu kanneen biraa ammo ni babballatu. Jiddugalli Ittisaa fi Eegumsa dhibeewwanii fi dhaabbileen fayyaa kan biroo Yunaayitid Isteet fi Addunyaa biroo keessatti gosoota vaayirasii kan covid-19 nama qabsiisuu dandahan ni tohatu.
Biiroon Fayyaa Minisootaa Gosti vaayirasii koroonaa haaraa Omicron jedhmu Minisootaa keessatti Ramsey County (Ramzii Kaawuntii Dablatee) mullachuu isaa mirkaneessee jira.
Saayintistoonni yeroo ammaa Omicom haala salphaa akkamiin akka daddarbu, hamma inni nama dhukkubsu, talaallii fi kunuunsi ammaa kun hagam Omicron ofirraa ittissuuf akka nu gargaaru irratti hojjachaa jiru.
Biiroon fayyaa odeeffannoo ummataan gahuun namoonni covid-19 ofirraa ittisuu akka dandahan ni jajjabeessa:
Talaallii fudhadhu, yoo siif hayyamama tahe talaallii madinummaa ol guddifachuuf fudhatamuus fudhadhu. Talaallii dhihoo kee jiru barbaadi.
Haguuggii fuulaa uffadhu.
Yoo si dhukkube mana turi.
Bakka walitti qabamaa irraa fagaadhu.
Yoo rakkoo fayyaa kan qabdu tahe yokiin nama rakkoo fayyaa qabu waliin jiraattta tahe vaayirasii kanaaf akka hin saaxilamne of eeggannoo dabalataa cimaa godhi.
Madinummaa ol guddifachuuf waraannachuu
Talaalliin madinummaa ol guddifachuuf waraanamu namoota hayyamamaa tahuuf kan ji’a jaha dura talaallii Pfizer yokiin Moderna marsaa lachuu waraannatanii jiranii fi Talaallii Johnson and Johnson yoo xiqqaate ji’a lama dura fudhataniifi. Hubannoo dabalataaf
Madinummaa ol guddifachuuf waraannachuun maaf na barbaachisa?
Talaalliin covid-19 baayyee bu’a qabeessa garuu ragaan haarayni akka mullisutti eegumsi isii yeroo keessa irrisaa deemuu isaati. Kun waanuma jiraatii fi eeggamuudha.
Talaallii madinummaa ol guddifachuuf waraannachuun kun talaallii biroo kanneen akka Utaalloo, Tiitanasii, huuba qoonqoo fi qakkee warreen jedhamaniifiis baratamaadha.
Yoo kaardii talaallii kee bakka buufachuu yokiin covid-19 talaalamuu kee mirkaneessuu barbaadde:
Yoo yeroo waraannatte walakkatti tahe kan lammataa yeroo waraannattu kaardii talaallii gaafadhu.
Rikardii talaallii keetii appilikeeshina Docket app irra laali. .
Yoo guutumatti talaalamteetta tahe Biiroo fayyaa Minisootaa qunnami yokiin 651-201-3980 bilbili.